Canonical dia mamoaka ny Ubuntu 18.04.1 Sary namboarina ho an'ny Microsoft Hyper-V | Avy amin'ny Linux
Canonical dia nanambara ny fisian'ny sarin'ny Ubuntu Desktop ao amin'ny galerie Microsoft Hyper-V ho an'ny mpampiasa Windows 10 Pro izay te hanandrana ny farany avy amin'ny fizarana Ubuntu Linux.
Miorina amin'ny Ubuntu 18.04.1 LTS Bionic Beaver, ny sary Ubuntu Desktop dia azo apetraka ao amin'ny galerie Microsoft Hyper-V amin'ny solosaina Windows 10 Pro. mpizara xRDP namboarina mialoha ho an'ny fifandraisana amin'ny protokolan'ny Microsoft Remote Desktop Connection (RDP) izay ahafahan'ny mpampiasa mizaha toetra ny tontolon'ny Ubuntu Desktop manontolo ho milina virtoaly.
Betsaka ny olona manerantany no mampiasa Ubuntu amin'ny milina virtoaly
Noho ny asa vitan'i Microsoft hanatsarana ny mpizara xRDP, dia ho tonga miaraka amin'ny sary ny Ubuntu Desktop azo alaina ao amin'ny Hyper-V birao mavitrika fanovana, fanatsarana ny fantsom-panoratana, fanatsarana ny fanondroana hifindra eo anelanelan'ny Windows 10 sy Ubuntu Desktop, ary koa ny famindrana tsotra sy haingana kokoa eo amin'ny lahatahiry sy rakitra amin'ny rafitra fiasa roa.
Etsy ankilany, ireo toe-javatra vaovao ireo dia ahafahan'ny mpampiasa Hyper-V mampiasa ny hv_sock, fomba fifandraisana byte-stream-based izay mamela ny Fifandraisan'ny broadband eo amin'ny rafitra fiasan'ny vahiny sy ny mpampiantrano. Ireo mpampiasa Windows 10 Pro izay te-hanandrana ny farany avy amin'ny iray amin'ireo fizarana Linux malaza indrindra dia tsy maintsy mametraka ny sary misy ao amin'ny galerie Hyper-V fotsiny amin'ny fanarahana ny torolàlana amin'ny efijery.
Araka ny lazain'i Canonical, izay vao haingana no nanambara ireo metatra voalohany azo avy amin'ireo mpampiasa nametraka Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu dia ampiasaina eran'izao tontolo izao, indrindra amin'ny milina virtoaly, izany no antony nanaovan'izy ireo ezaka be tamin'ny fanaovana kinova farany tsara ho an'ny Hyper-V.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Canonical dia mamoaka ny sary Ubuntu 18.04.1 nohatsaraina ho an'ny Microsoft Hyper-V
Tanisao ny kinova vaovao an'ny Clonezilla live 2.6.0-5